Jubbaland oo Digniin Culus kasoo saartay ciidamada cusub ee Farmaajo ku daabulayo Gobolka Gedo (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Jubbaland oo Digniin Culus kasoo saartay ciidamada cusub ee Farmaajo ku daabulayo Gobolka Gedo (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maamul goboleedka Jubbaland ayaa digniin culus kasoo sartay Ciidamadii ay dowladda federaalku shalay ka dejisay degmada Doolow iyo dagaal ay sheegtay inuu ka qarxi karo Gobolka Gedo.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in abaaro ku dhufteen gobolkaas, balse halkii ay dowladda dhexe ka caawin laheyd dadka ku nool Gedo ay ku sii daabuleyso ciidan, hub iyo gaadiid dagaal.
Qoraalka Madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheega in Mas’uuliyadda wixii ka dhashay dagaalka uu wado madaxweyanha waqtigiisu dhammaaday uu mas’iiliyadiisa isaga kaliya qaadi doono.
Previous articleFarmaajo oo Maamul Goboleedyada ugu baaqay Shir cusub, kadib Warkii kasoo baxay Dowladda Mareykanka
Next articleMadaxweynaha K/Galbeed oo ugu danbeyn Muqdisho ku soo wajahan iyo Farmaajo oo kasoo hor mariyey…